Ku xidh jaakad dhogorta
Waxaa laga yaabaa, xataa xitaa ha ka hadlin wax ku oolka ah ee alaabada ka samaysay dhogorta dabiiciga ah. Inta badan gabdhaha leh weedhaha dabiiciga ah waxay isla markiiba ku dhajiyaan jaakad dhogorta. Oo ma aha la yaab leh, sababtoo ah dharka dhogorta dabiiciga ah waa mid ka mid ah daciifnimada of kasta fashionista. Si kastaba ha ahaatee, jaakad dhogorta ah oo laga sameeyay dhogorta dhabta ah maahan daweyn aad u macquul ah, sidaas daraadeed walxo kasta oo qurux badan leh ama mid kale ayaa eegaya miisaaniyad dheeraad ah marka hore. Ilaa hadda, mid ka mid ah jilicsanaanta dharka caanka ah ee ugu caansan ayaa loo tixgelinayaa inuu yahay moodooyinka shubka furan. Waxyaabaha noocan oo kale ah waxay u egyihiin kuwo aad u fiican, jilicsan iyo, intaa waxaa dheer, aad u la mid ah jaakadaha dhogorta leh ee mink. Koofiyadaha dhogorta ee haweenka laga soo shubo, xiitaa inkasta oo ay qiimo hooseeyaan, xoojinayaan xaaladda bulshada, booska dhaqaalaha iyo dhadhanka wanaagsan .
Dharka furfuran ee qurxinta leh
Sida laga soo xigtay qaab-dhismeedyada, dharka dhogorta ka soo shaabad ka eeg ugu fiican ee cutubka classic. Sidoo kale alaabtaasi waxay leeyihiin laba dherer oo kaliya - mini iyo maxi. Dharka dhogorta gaaban ee shaabadda waa nooc kasta oo ka sarreysa jilibka. Noocyada jilibka iyo hoosta ayaa iska leh qaybta dharka dhererka dheer ee shaabadda. Noocyada gaaban inta badan waxay leeyihiin jilicsanaan muujiyay silhouette ama gooyo toosan. Dharka dhogorta dheeriga ah ee shaabadda, gaar ahaan muraayadaha dabaqa, waxaa ku yaala gooyo badan oo dumar ah oo leh duunyo, iyo sidoo kale waxay xoojineysaa suunka leh suunka xarrago leh.
Koofiyadaha dhogorta ee haweenka ka soo shaabad ah aad ayey u yaryihiin marka laga reebo madow, ubax. Tani waxay sabab u tahay xaqiiqda ah in alaabtan ka timaada dhif this rinjiga. Maadaama balaashka furan uu leeyahay dhalaal aad u qurux badan, oo sida ugu fiican loo arko midab madow ah, naqshadeeyayaashu waxay door bidaan in aysan lumin faa'iidadaas iyada oo rinjiyeynta badeecadda ku jirta midab kala duwan. Taasina waa sababta ay haweenku u badan yihiin dharka muraayadda dhogorta leh ee dhogorta, ka dib markay kharashka u iftiiminayaan, waa mid aad u fudud in la isku daro qaababka qaaliga ah ee mink.
Dharka midig ee garabka
Dharka fur furaha
Jardiinooyinka guriga ee xiisaha leh
Waxyaabaha aan shaki ku jirin
Dharka - novelties
Kabaha cas ee cirifka
Coat kula saddex geesood ah gacanta
Sidee loo doortaa jaakad dhogorta midig?
Nasiib darro dumarka - 46 sawir oo ah moodooyinka ugu casrisan iyo waxa iyaga lagu xidho?
Isboortiga Biyaha Atlantic
Sarafaanka dumarka uurka leh
Maxaa ka fiican - Diflucan ama Flucostat?
Jessica Biel ayaa furay makhaayad qoys
Waa maxay magaca Alain?
Dharka la jimicsado ee 2016 - midabada, qaababka, qaababka
Brunei - xaqiiqooyin xiiso leh
Miisaska cuntada lagu kariyo
Muxuu jimicsiga jirka ku yiraahdaa?
Dahlias way jabtay - maxaad samayn lahayd?
Maxay shimbiruhu u riyoodaan?
Mudada noolaanshaha dadka ee wadamo kala duwan iyo sida loo kordhiyo?
Metaplasia unugga taranka ee makaanka afkiisa
Manicure leh ubaxyo
Sidee loo wareejiyaa ilmo kale xannaanada?
Dharka ugu sarreeya 15-ka munaasabadda Oscar, oo qiimo weyn ku fadhiya
Muxuu ukumaha jabay u eg yahay?
Miyuu sariirta sare ku dhejiyaa - maxaa la xiraa iyo sida loo abuuro qaansooyinka cas?
Maxaad quudineysaa hamster?
Kristen Stewart iyo gabadhii hore Kara Delevin ayaa dhunkaday taariikh